Sida loo sameeyo sawiro Procreate talaabo talaabo ah? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo sawiro Procreate talaabo talaabo ah?
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay inaad tillaabo hore u qaaddo oo aad gasho adduunka sawirka dhijitaalka ah, codsiga Procreate waa qalabka ugu fiican ee lagu bilaabo.
Taran, waa kan barnaamijka la soo dejiyey gudaha App Store, iyo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyay marka ay timaado naqshadaynta iyo sawirka dhijitaalka ah. Waxay leedahay hawlo kala duwan, kuwaas oo kaa dhigi doona inaad ka faa'iidaysato xirfadahaaga faneed, haddii aad tahay bilawga ama xirfadlaha adduunka farshaxanka.
Qoraalkan, waxaanu kuugu sheegi doonaa sida loo sameeyo sawiro si ay u tarmaan talaabo talaabo, si fudud oo ku siinaya xoogaa talo ah haddii aad ku cusub tahay qaybtan.
2 Sida loo sawiro Procreate
2.1 Sida loo sameeyo shiraac cusub
2.2 Sida loo beddelo burushka ama tirtiraha
2.3 Sida loo abuuro lakab cusub
2.4 marka hore sawir
2.5 horumarinta fikradda
2.6 bilaabo inuu midabeeyo
2.7 Taabashooyinka ugu dambeeya, ku dar hadhka
Waa inaad ku bilowdaa sida ugu fudud, taasina waa ogaanshaha waxa Procreate yahay iyo waxa ka dambeeya codsigan.
Procreate waa abka farshaxanka dhijitaalka ah, waxaa sameeyay Savage Interactive 2011.
Tan iyo markii la sii daayay, ayaa wax ka beddelay suuqa app-ka sawir-qaadista, oo noqday codsiga tixraaca ee dadweynaha xiiseynaya farshaxanka dhijitaalka ah. Oo tan, waxay ku guulaysatay iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda, sahlanaanteeda isticmaalka iyo waxtarkeeda. Interface waa mid aad u macquul ah, markaa ka dib baaritaan yar oo ku saabsan, waxay noqon doontaa mid aad u fudud in la isticmaalo.
Waa a App-ka kaliya ayaa loo heli karaa iPadka ama iPad Pro, kaas oo lagu sameeyo sawiro fudud ilaa mid aad u faahfaahsan.
Sida loo sawiro Procreate
Qoraalkan ayaan arki doonnaa Sida loo sameeyo sawiro ku soo kordhi talaabo talaabo hab fudud raac talaabooyinka soo socda:
Sida loo sameeyo shiraac cusub
Sida loo beddelo burushka ama tirtiraha
Sida loo abuuro lakab cusub
marka hore sawir
bilaabo inuu midabeeyo
Taabashooyinka ugu dambeeya, ku dar hadhka
CAbuuritaanka shiraac cusub waa tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan ogaano si loo bilaabo Procreate.
Waa tillaabo aad u fudud, marka ugu horeysa waa in aan ku furno app-ka iPad-keena, ka dooro faylka + qaybta sare ee midig ee shaashadda, ka dibna daaqad ayaa ka soo bixi doonta taas oo ay tahay in aan ku dhejino. dooro cabbirka shiraac ee aanu doonayno inaanu ku shaqayno.
Haddii fursad ahaan aan rabno a shiraac caado ah, oo cabbir ah oo codsigu aanu na siin, waxaan samayn karnaa annaga.
Waxaan aadeynaa Procreate canvas gallery, oo waxaan ku dhufannaa sumadda + dhinaca midig ee shaashaddayada. Ka dib markaad taabato astaantan, daaqad pop-up ayaa soo bixi doonta halkaas oo aan dooran doono ikhtiyaarka lagu habeynayo cabbirka shiraaca, iyo waxaan ku siin doonaa qiyamka aan rabno.
Mid ka mid ah qodobbada aasaasiga ah ee ugu muhiimsan waa kuwan soo socda, sidee baan u beddeli karnaa burushka ama tirtiraha. Aad bay u fududahay in la sameeyo waxaana jira sidoo kale noocyo badan oo kala duwan oo laga dooran karo.
Marka aan haysanno shiraac, waxaan raadineynaa tabka burushka ee ku yaal midigta sare. menu ayaa furmaya iyo waxaan dooranaa ikhtiyaarka burushka si fiican noogu habboon shaqada.
U samee sida barnaamijyada naqshadeynta kale, ka shaqeeya nidaamka lakabka ah. Lakabyadani waxay caawiyaan habaynta shaqada, iyo in la qaybiyo, way fududahay in la sameeyo isbeddel, la isku daro ama si toos ah u tirtirto.
Si aad u abuurto lakabyo kala duwan, waa inaan nafteena dul dhignaa kanvas, taabo faylka lakabka ee ku yaal qaybta sare ee midig ee shaashadda, oo dooro + iyo Procreate waxay abuuri doontaa a heerka lakabka cusub.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan helno waa mid ka mid ah fikradda ah inaan rabno inaan nolosha siino in Procreate.
Waxaan hor dhigeynaa shiraacyada banaan, waxaanan taabaneynaa astaanta muhiimka ah ee bidixda sare, waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka canvas, hoostana waxaan awood u siineynaa ikhtiyaarka hagitaan sawir.
Waxaan bilaabaynaa samaynta sawir-gacmeedka, taasna waxaan ku dooraneynaa midab midab cawl ah, dhib malahan midabka aad doorato, waxaan taabaneynaa astaanta burushyada waxaanan dooraneynaa burush sawir leh iyo qalin 6B, waxaanan bilaabaynaa inaan si degdeg ah u sawirno fikradayada.
Marka aan helno sawirka sawirkayaga, waan tagi doonaa dib u tabashada, dib u eegista, si loo qeexo foomamka.
Sida aan sheegnay, mar haddii aan haysanno sawir-gacmeedkayaga, waxa soo socdaa waa qeex foomamka, walxaha ka kooban. Tag faahfaahinta.
Waxaan heli doonaa faahfaahintan annagoo ku ciyaarayna burushyada kala duwan ee Procreate na siiya, ama kuwa aan soo dejinay, maadaama iyaga aan ku ciyaari karno mugga iyo textures.
Markaan hore u qeexnay sawirkayaga, Tallaabada xigta waa inaan raacno waa midabaynta, oo aan la mid ahayn barnaamijyada kale ee naqshadaynta oo ay tahay inaad doorato qaybaha oo aad midabayso, Procreate waxaad ku tilmaantaa midabka aad rabto qaybta sare ee midig ee canvas, oo u jiid naqshadeynta iyo markaad sii daayo Qalinka Tufaax ama farta aad ku jiidatay, meesha la calaamadeeyay waxaa ka buuxsami doona midab.
Aad bay muhiim u tahay in Meesha la midabeynayo ayaa si fiican u xiran, Haddii kale, waxa dhici doona waa in midabku uu dabooli doono dusha oo dhan.
Ku soo kordhi kaaga maaskarada jarista, Waxay kuu ogolaaneysaa inaad rinjiyeeyso adigoon dhaafin xadka, taas oo ah, waxaad gooyn kartaa hal lakab oo kale laakiin waxa aad ku rinjin karto lakabka hoose oo aan ahayn kan kale.
Si aad u abuurto maaskaro jarista, marka hore waa inaad abuurtaa lakab cusub, menu ayaa la soo bandhigi doonaa, waxaanu taaban doonaa xulashada maaskarada oo aad haysatid. Falaadh ayaa ka soo bixi doonta lakabkan oo tilmaamaysa lakabka hoose. Markaad bilowdo inaad sawirto, waxaad arki doontaa kaliya waxa ku jira lakabka hoose.
Markaynu sawirkeena dhammayno, midabnay, oo tafatiraha aanu siinay, waa waqtigii aan bixin lahayn dhammayn.
Si aynaan uga tagin sawir siman waxa waxaan raadineynaa waa mug, waa inaan ku ciyaarnaa burush iyo midabyo. Haddii aan haysano ikhtiyaarka burushka hooska qumman ee qumman, haddii kale, hab aad u fudud waxaan ku sharxi doonaa sida loo abuuro hooska.
Marka hore waa inaan ogaanaa meesha aan rabno inaan hadhkaas dhigno, waxaan dooranaa burushka iyo midab la mid ah kan lagu isticmaalo sawirka, waxaa jira laba ikhtiyaar: ama waxaan qaadanaa cod aad u jilicsan oo ku dhow pastel, ama waxaan hoos u dhigi karnaa midabka midabka iyo midabka aagga la doortay ilaa aan ka abuurno hooska qumman.
Procreate waa app leh qalabyo iyo fursado badan si ay kuu caawiyaan marka aad sawirayso. Sidaan horeyba u ognahay, waxay leedahay burushyo kala duwan, laakiin had iyo jeer waxaa suurtogal ah inaad kala soo baxdo burushyo badan oo kala duwan oo ku yaal boggaga internetka ama laga soo dejiyo kuwa Adobe Photoshop haddii aad u baratay inaad la shaqeyso.
Waxaan rajeyneynaa in tillaabooyinkan aasaasiga ah ay si wanaagsan kuugu adeegeen markaad sawirto Procreate talaabo talaabo oo aad awooddo Bilaw inaad iska dayso male-awaalkaaga markaad sawirayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo sameeyo sawiro Procreate talaabo talaabo ah?